Linq: Wako Anopa Wekunze Munda Kutaurirana (NFC) Bhizinesi Kadhi Zvigadzirwa | Martech Zone
Linq: Wako Anopa Wekunze Munda Kutaurirana (NFC) Bhizinesi Kadhi Zvigadzirwa
Chishanu, July 9, 2021 Chishanu, July 9, 2021 Douglas Karr
Kana iwe wanga uri muverengi webhusaiti yangu kwenguva yakareba, iwe unoziva mafaro andinoita pamusoro pemhando dzakasiyana dzemakadhi ebhizinesi. Ndakave nemakadhi epamberi-ayo, makadhi akaenzana, makadhi esimbi, makadhi akaomeswa… ndinoafarira zvakanyanya. Ehe, nekuvharirwa uye kusakwanisa kufamba, pakanga pasina yakawanda yekudikanwa kwemakadhi ebhizinesi. Iye zvino iko kufamba kuri kuvhurika, zvakadaro, ndakafunga kuti yaive nguva yekuvandudza kadhi rangu uye kuwana zvimwe paodha.
Chinhu chimwe chete chandinogara ndichitya ndechekuti mangani makadhi ebhizinesi ekutenga uye mangani ekuunza kune chimwe chiitiko. Kusvika ndazoitika Linq. Linq ine yakasarudzika mutsara wedhijitari bhizinesi kadhi zvigadzirwa zvine iyo NFC yakadzamidzirwa. Kana iwe wanga uchinditevera kwechinguva, iwe uchaziva kuti ini ndakaedza neseti yeNFC makadhi munguva yakapfuura asi haina kushanda. Iyo kambani yaive nezvakawanda nyaya ichizvipurinda uyezve iyo yekuenda URL yaive shoma pane yakasarudzika.
Linq yakasiyana, ichibatanidza nharembozha yekuvaka peji yemahara yekumhara (kana yakabhadharwa peji pamwe nezvimwe zvakanaka) pamwe nemhando yemidziyo yaunogona kutenga iyo yakamisikidzwa yeNFC. Peji rako rekumhara rinogona kuve nehukama hwehukama hwehukama, mafaera ekubhadhara (Venmo, PayPal, kana CashApp), uye gonesa mushanyi wako kurodha kadhi rako rekutaurirana kuti akuwedzere iwe zvakananga kune vavanosangana navo.
NaLinq Pro, kunyoreswa kune yavo Leap chigadzirwa, iwe unogona zvakare:
Gadza chero peji rekuenda raungade mukati me Leap Zvisarudzo.
Wedzera zvimwe zvemukati kune rako reLinq peji rekumhara. Ndakawedzera vhidhiyo yeYouTube asi iwe unogona zvakare kuwedzera zvinongedzo zvemisangano, Spotify kana inoridza Soundcloud.
Wedzera fomu kune peji rako kuti utore rumwe ruzivo.
Nekadhi ravo rePrimiyamu uye mamwe maitiro, ini ndakakwanisa kuvaka tsika bhizinesi kadhi ine logo yangu pairi (pikicha pamusoro) kuti ini ndinogona kungonamira mune yangu foni kesi ndobva ndoburitsa chero chero munhu paanobvunza kana ini ndikapa kadhi rangu. Panzvimbo pekupa munhu wega wega bhizinesi kadhi, ini ndinogona kuribata pafoni yavo kana ivo vanogona kutarisisa kodhi yeQR kuseri uye ivo vanounzwa kune peji rekumisikidza nerangu rwese ruzivo pamwe neyekutaurisa download link kuti ndipinze yangu ruzivo rwekutaurirana nharembozha yavo!
Douglas KarrKumhara Peji paLinq
NFC Yakaburitswa Dhijitari Bhizinesi Kadhi Zvigadzirwa
Linq haingopa chete kadhi rekutanga iro randakatenga, ivo chaizvo vane sarudzo hombe yezvigadzirwa kusarudza kubva:
Kadhi reLinq - rondedzero yesarudzo yemakadhi-ekushandisa-chete kwaunogona kuwana iwo akajeka, uine logo yako yakadhindwa paari, kana uine yakazara tsika dhizaini.
Linq Bracelet - iri nyore rundarira iyo NFC yakadzamidzirwa ... ingo rova ​​rundarira nefoni yako uye peji rekuenda rinovhura.
Linq Band yeApple Watch - bhendi reApple Watch iro rakadzika midzi muNFC… ingo rova ​​bhendi nefoni yako uye peji rekuenda rinovhura.
Batanidza Hub - Iyo desktop kana countertop hub iyo NFC inogoneswa uye ine QR kodhi pairi kune vanhu vanoshanyira tafura yako kana dumba.
Batanidza Tap - Bhatani rinotonhorera reNFC raunogona kunamatira kumashure kwefoni yako kana kesi yefoni. Izvi zvinogona zvakare kugadziriswa neQR kodhi kana logo yako.
Linq yezvikwata inoita kuti iwe utarise zvikwata zvako networking performance pavanenge vachigovera ruzivo rwavo rwekuonana kune vamwe.
Kana iwe uchimhanyisa chiitiko chemagariro, Linq inopa mabheji uye hubs kune vanopinda uye vatengesi. Iwe unogona kuteedzera kubatana uye kubatirana kune vanopinda, vanotsigira, uye vatengesi!
Tsvaga zvimwe nezve zvigadzirwa zveLinq nezvipiriso kuchitoro chavo chepamhepo:
Kuzivisa: Ini ndakasaina saMumiriri weLinq uye ndiri kushandisa yangu yekubatana link mune ino chinyorwa.
Tags: Androidbhizinesi kadhimari appkadhi rekubatakuonana fairaContact informationiPhone iosleaplinqlinq pronfcnfc apple bhendinfc rundariranfc bhizinesi kadhinfc makadhi ebhizinesinfc bhataniuyai
Chii chinonzi Enterprise Tag Management? Nei Uchifanira Kuteedzera Tag Management?